Qaranimadda Somaliland waxba kama bedalayso shakhsiyaad qaran dumisnimo u xuub siibay | Somaliland.Org
Qaranimadda Somaliland waxba kama bedalayso shakhsiyaad qaran dumisnimo u xuub siibay
November 6, 2012	Ma aha wax cusub in hadba dawlad halhaleel ah marka laga dhiso Soomaaliya in lagu soo daro xubno dibad wareeg ah oo xagga iyo xagga midna wax ugu filayn.
Sidii caadada u ahayd ayaa dawlada shalay lagaga dhawaaqay Muqdisho lagu soo daray xubnahaasi aan sheegayno ee ka soo jeeda carrada Somaliland dhalasho ahaan balse aan cid ay ka matalaan jirin.
Arritani waxa ay muujinaysaa in ay weli hayaan waddadii qalloocnayd ee qodxaha badneyd, halkii ay kaga toosi lahaayeen in ay tooda dhistaan, kana shaqeeyaan danahooda intaanay cid kale isku shuqlin.
Dawladda Somaliland wax badan ayay ku baaqday in ay la jeceshahay nabad iyo deggenaansho ka islaaxa Soomaaliya. Sidoo kale, wax badan ayay ugu baaqday inay ku soo dhacaan dhabbaha saxda ah oo aanay dhalanteed run moodin, wax badan ayay ugu yeedhay inay u soo noqdaan xaqiiqada oo aanay kolba diran nin aan u furi doonin.
Waxa intaa dheeraa, dawladda Somaliland si ay u muujiso kalsamaan, waxa ay u furtay Soomaaliya wada hadal ku saabsan sidii loo noqon lahaa walaalo ah laba dal oo deris ah oo ku wada nool nabad iyo barwaaqo.
Waxa ay ka shaqeysay sidii la isaga ilaalin lahaa wixii caraqalad gelin kara wada hadallada, waxaanay marar dhawr ah uga digtay Soomaaliya in ay ka taxadiraan wixii qalindaaraya wada hadallada.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Mudane Cumar, ayaa uga digay oo farrintii ugu dambaysay u gudbiyay in ay ka dhawrsadaan wixii wax yeelaya xidhiidhka labada dal iyo dad, isla markaana sida aad u dhisan lahaydeen arrimihiinna,
“Waxa aan dawlada soomaaliya u soo jeedineynaa in ay dawladnimadoodu ku koobnaato dalkooda oo qudha. Waxa aan uga digeynaa in ay qaadaan tallaabooyin guracan oo carqaladeyn kara jawiga wadahadalada u bilowdey labada dawladood ee caalamku ku baaqey.” Ayuu yidhi Dr Maxamed.
Intaasi oo talo iyo wax u sheeg ah oo loogu yaboohay waxa aad moodaa inay Soomaaliya ka tahay cadduur dhawdhawdu umay dhicin. Waxa hubaal ah hubaal ah in aanay Somaliland halna ka dhimayn shaqsiyaad dibad meer ah oo lagu darsadaa gole Wasaaradeed, balse sidii la arki jirey ay iyaga uun ku ahaan doonaan buro ku taal oo iney wax yeesho mooyee aan anfac ku soo kordhin.
Si kasta oo ay tahayba, waxa aan leenahay dawladda Soomaaliya idinka oo ka faa’iidaysanaya fashilaadihii gaadhay kuwii idinka horreeyay ka feejignaada in aad soo faro gelisaan arrimaha Somaliland, waa in aad ku koobnaataa arrimihiinna iyo dalkiinna oo aydaan noqon lax dhukani abaar moog.
Previous PostShirkadda TELESOM Oo 20 Kun oo Dolar ugu Deeqday Tartanka ciyaaraha GoboladdaNext PostSuldaan Baane oo Baaq u jeediyay Komishanka iyo Axsaabta	Blog